HomeEuropa LeagueCruyff Oo Fasiraad Ka Bixiyey Sababta Qaab-Ciyaareedka Neymar Hoos Ugu Dhacay
Khabiirkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo xulka dalka Holland, Johan Cuyff ayaa soo faqay sirta sababtay hoos u dhaca qaab-ciyaareedka laacibka reer Brazil ee Neymar.
Xiddiga reer Brazil ee Neymar oo ay hadda da’diisu tahay 22 jir ayaa sannadkii hore ku biiray kooxda Barcelona iyadoo lacag badan lagaga soo iibsaday naadiga Santos ee ka dhisan carriga Brazil, waxaanu noqday ciyaartoygii ugu qaalisanaa ee ay Barcelona iibsato waligeed. Waxa kale oo intaa dheer fadeexado musuq-maasuq oo hadheeyey heshiiska Neymar ugu soo wareegay Barcelona, taas oo galaafatay madaxweynihii kooxda Rosel oo xilka iska casilay, isla markaana ay ku socoto dacwad la xidhiidha iibka ciyaartoygan.
Cruff wuxuu aaminsan yahay in ciyaartoygan looga fadhiya inuu is muujiyo oo uu qaab-ciyaareedkiisii sarreeyey soo bandhigo, laakiin wuxuu farta ku goday ciyaartooyada afka hore Barcelona uga ciyaara ee uu xafiiltanka boosku ka dhexeeyo oo uu aaminsan yahay inay ka masayrsan yihiin lacagta badan ee uu mushaharka u qaato Neymar.
“Mushkiladda Barcelona haysataa waa Neymar. Waa ciyaartoy weyn, shakina lama gelin karo laakiin heshiis lama geli kartid ciyaartoy 21 jir ah oo ma siin kartid mushahar ka badan ka ciyaartooyada kale eek u guulaystay tartamada oo dhan. Qofna ma wanaagsana da’da 21 jirka” sidaa waxa yidhi Johan Cruyff oo u warramay El Mundo Deportivo.
“Waxa intaa dheer, Barcelona waxay hore u haysatay ciyaartoyga ugu weyn adduunka (Lionel Messi), markaa cunug 21 jir ahi xubin firfircoon ma noqon karo. Tani kama suurtogasho kubadda cagta. Da’da 26 jirka, haa way suurtogeli kartaa, laakiin ma dhacdo 21 jirka” ayuu sii raaciyey Cruyff.
Neymar ayaa waxa uu xili-ciyaareedkan tartanka La Liga u dhaliyey kooxdiisa toddoba gool, waxaanu u saftay 21 kulan.
Ronaldo:”Ma Aaminsani Inaan la Soo Ciyaaray Xiddigo iga Wanaagsan Aniga”